पाल्पाको त्यो उकाली बाटो, जहाँ २०१६ सालमा राजा महेन्द्र बास बसेका थिए – Palpa Samachar
पाल्पाको त्यो उकाली बाटो, जहाँ २०१६ सालमा राजा महेन्द्र बास बसेका थिए
By palpa samachar	 On Feb 16, 2020
यहाँका बुढापाकाहरु अहिले पनि घर कहाँ हो भनेर परिचय गराउँदा ठूली या सानी उकालीकै नाम लिन्छन् । पाल्पा र आसपासका जिल्लाका बुढापाकाहरुमा पनि यस क्षेत्रको अहिलेको नाम भन्दा पहिलेकै उकाली नाम स्मरणमा छ ।
तिब्वतको सिमाना भोट देखि भारतसम्मका मानिसहरुको स्मरणमा अहिले पनि छोटो घोरेटो÷गोरेटो वाटो (उकाली) चर्चामा छ । राम्दीबाट यता फर्कने क्रममा बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं. ५ दर्लमडाँडाको ओस्वाखोला देखि करिव डेढ किलोमिटर उकालो दर्लडाँडाको पसल सम्मको वाटो सानी उकालीको नामले परिचित छ । यो बाटोको बीचमा खासै बस्ती छैन । यसको सबै भुभाग दर्लमडाँडामा पर्छ ।
सानी उकाली सकिएपछि खहरेखोला अन्र्तगतको खोलाकी वुढीको घरदेखि (खहरेखोलाको किनार) वगनासकाली ९ चापपानीको वगनास सम्म करिव साढे ३ किलोमिटर उकालो बाटो छ । त्यो बाटो ठूली उकाली नामले परिचित छ । यो बाटोको बीचमा जुकिया, बाटुलीचौर, बझादी लगायतका टोलहरु रहेका छन् । यसको सबै भुभाग चापपानीमा पर्छ । दुवै उकालो भएको हुदाँ यो वाटो सानी र ठूली उकालीको नामले चिनिएको हो । जसका नाम पनि बटुवाहरुले नै राखिदिएको स्थानीय जानकारहरुको भनाई छ ।
बि.सं.२०२२ सालमा सिद्घार्थ राजमार्ग अन्र्तगत (सुनौली–पोखरा) को निर्माण हुनुभन्दा अगाडि सबै यात्रुहरु यही बाटो पैदलबाटै आउने जाने गर्दथे । स्याङ्गजा, कास्की,पर्वत, तनहुँ, लम्जुङ्ग, वाग्लुङ्ग हुदै तिव्वतको भोट सम्मका र अर्कोतिर गुल्मी अर्घाखाँची र कपिलवस्तु सम्मका पाका पुस्ताहरुले पनि यो बाटोको उपयोग गरे । अझै पनि यि क्षेत्रका पाका पुस्ताहरुले ठूली र सानी उकालीलाई विर्सेका छैनन् ।
यो बाटो छेउछाउमा त्यसताका व्यापार पनि हुन्थ्यो । काठका खाबा गाडेर स्याउलाले छाएका घर (छाप्रो) र खरको छानो र मान्द्राको गारो भएको घरमा होटलहरु संचालनमा थिए । ठूली उकाली प्रारम्भ भन्दा केही माथि त्यसबेला कानी नामकी महिलाको भट्टी पसल निकै चर्चामा थियो । अहिले त्यो ठाउँलाई कानीबारी भनेर चिनिन्छ । त्यस्तै उकाली छेउ छाउमा दर्जनौ साना पसल थिए । जहाँ स्थानीयहरुले घरमा उत्पादित फलफुल, दही, महि, दाउरा समेत लगेर बेच्ने गर्दथे ।
यो बाटोमा मानिसहरुको घुइचो नै हुन्थ्यो । यात्रा गर्ने क्रममा भए पुगेमा छाप्रोमा नभए रुखको फेदमा खुल्ला आकाश मुनि पनि वटुवाहरुले रात विताउने गरेको बगनासकाली ९ का ८७ वर्र्षिय टोपलाल तिमिल्सिनाले बताए । ढाकरमा नुन लगायत खाद्यन्नहरु बोकेर हिड्नेलाई ढाक्रे भनिन्थ्यो । ढाक्रेहरुको भिड् भाड हुन्थ्यो उनीहरु छाप्रो रुखमुनी वस्दथ्थे । लाहुरेहरु पनि यो वाटो भई ठूलाठूला बाकस बोकेर आउने जाने गर्थे । व्यापारीहरुले गधा खच्चडमा खाद्य सामान नुन, तेल, चामल, कपडा लगायत बोकाउने गर्थे । सामान वासवस्ने ठाउँमा उतारी गधा खच्चड्हरु चर्न छोडि दिदाँ वाटोको छेउछाउमा लगाइएका वालीहरु समेत खाइदिने गर्दथे । त्यतिबेला बाटोमा हिड्ने बटुवाहरुका लागि आफूले उत्पादन गरेको गोन्द्रा (ठूलो) केरा ५ पैसामा ३ कोसा बेच्ने गरेको तिमिल्सिनाले बताए ।
लाहुरेहरु भारत–वटौली पाल्पा हुदै घरमा जान र घरवाट छुट्टी पुरा गरी फेरी लाहुर जान यो बाटोकै प्रयोग गर्थे । छोटो बाटोको रुपमा रहेको यो बाटोले पोखरा, पाल्पा हुँदै बटौलीसम्म जाने र फर्कनेहरुका लागि पुलकै काम गरेको थियो । छाप्रो र रुखको फेदमा ठूलो संख्यामा वटुवा (ढाक्रे, ढाकरमा सामान वोक्ने) हरु हल्ला खल्ला गरी वस्ने गदथ्थे । उता भट्टीमा लाहुरेहरु नाच गान गर्ने दोहोरी गित गाई रमाइलो गर्ने गर्दथ्थे ।
वि.स. २०१६ सालमा राजा महेन्द्र राम्दी नजिकै चिउरीवासमा वासवसी यहि उकाली हुदै तानसेन सवारी भएको वगनासकाली ५ दर्लमडाँडाका ८३ वर्षिय ऋषिराम गैरेले वताए । राजा आउने भनेर छाप्रो वनाउन गइयो, चिउरीवास खेतमा छाप्राहरु वनाइयो, राजा संग दर्शन भेट गरी माला लगाई दियौ महाराजाको पैदल सवारी भएको थियो गैरेले थपे । चिउरीबासलाई अहिले राजा महेन्द्र बासको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
टेलिफोनका लागि ३ लाइनको तामाको तार यहि वाटो हुदै पोखरा सम्म पुगेको थियो । आफू पोखरा पढ्न वस्दा तानसेनवाट दाइले फोन गर आमाको मृत्यु भएको खवर दिएको र आफू घरमा आएको उनले अनुभव सुनाए । अहिले ति तामाका तार कहाँ गए केही पत्तो छैन तर कतै कतै पुराना रुखहरुमा तार अड्याउन ठोकिएका फलामका किल्लाहरु भने देख्न पाइन्छ ।
बटौलीवाट खाद्यन्न सामान खरिद गरी आफै वोकेर ल्याएर यही ठाउँमा बेचेर घर गुजारा चलाउनेहरु पनि यही बाटो हिडे । ठुला व्यापारीहरुले गधा खच्चडको प्रयोग गरे भने साना व्यापारीहरु पिठ्युमै भारी बोकेर हिंडे । बगनासकाली–६ यम्घाका ७९ वर्षीय वेदराज वस्यालले २०२३ सालमा बटौलीवाट ६ रुपियाँमा १ पाथी चामल खरिद गरि १० रुपियाँमा राम्दी पारी परेवा कुनमा मोटर वाटो खनाउने शेर्पा थरका मेठलाई बेचेको अनुभव सुनाए । उनले यसरी चामल बेचेर ४ हजार ४ सय कमाएका थिए । बटौलीबाट आफूले १० देखि १२ पाथी चामल ल्याएर बेच्ने गरेको बस्यालले बताए । त्यतिबेला बाटो खन्नेहरुले प्रति दिन ३ रुपियाँ २० पैसा पाउथे । उनले भने ।
हुलाकीहरु टाढैवाट संकेत गरी भाला (एक प्रकारको लठ्ठी) वजाउदै हुलाक वोकी हिड्दथ्थे, वटौलीवाट ल्याएका मट्टीतेलको टुकी वाली भट्टीवालाले व्यपार गर्ने गर्दथ्थे । ठुली उकालीमा ३ ठाउँमा वझादी, मुलवाटा र खोलाकी वुढीको घरमा वास वस्न खानका लागि भट्टी संचालनमा रहेको र सानी उकालीमा एक ठाउँ स्वामीको फेदमा भट्टी माथि डाँडामा पसल रहेको स्थानीयहरुले बताउँछन् । यो ठाउँको नाम अहिले पनि पसल भन्ने चलन छ ।
दर्लमडाँडाकै राम्दी क्षेत्रमा वुवा आमाहरुले कपडा तथा किराना सामान विक्री गर्ने गरेको राम्दीका ७० वर्षिय नन्दकिशोर अमात्यले वताए । सानी ठूली उकाली आउने र जाने नाकाको रुपमा रहेको राम्दी मा त्यो वेलामा धेरै चहलपहल थियो व्यापार पनि वेस्सरी हुन्थ्थो । त्यो वेलालाई सम्झदा सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेपछि व्यपारमा गिरावट नै आएको अमात्यको अनुभव छ ।
ढाक्रे ,लाहुरे र अन्य यात्रीहरुको भिड भाड्ले गर्दा वाटोमा एक्लै हिंड्दा पनि डर नहुने अवस्था त्यति वेला थियो । वुवा आमाले ठूली उकालीको वझादीमा यो क्षेत्रकै ठूलो भट्टी चलाउनुभयो, अहिलेपनि हामीलाई भट्टीका भन्छन, वगनासकाली ९ चापपानीका ७४ वर्षिय विन्दवहादुर थापाले भने । थापाका अनुसार उनको घरमा ६ वटा पाहुँना वस्ने घर हुँदा पनि सबै पाहुनालाई बसाल्न नसकिने अवस्था थियो । बटुवाहरुको भिडभाड हुन्थ्यो । आफू बुबा आमालाई सहयोग गर्ने कुखुरा, खसी गाउँतिरबाट खोजी ल्याउने काम गरेको बताउँदै थापाले २ रुपियाँ ५० पैसामा सादा भात र ३ रुपियाँ ५० पैसामा मासुसंग भात खुवाउने गरेको बताए ।
पाका पूस्ताले मात्र चिन्ने र जान्ने बनेको विषय ठूली र सानी उकाली नयाँ पुस्तामो जानकारीमा छैन । पाका पुस्ता ठूली र सानी उकालीको बाटो सम्झदै वटौलीबाट नुन तेल बोकेको कुरा नयाँ पुस्तालाई सुनाउदा अलमल पर्नु स्वभाविकै हो । अहिले हरेक ठाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, यात्रा सहज भएको छ । त कसरी ठूली र सानी उकालीको बाटो भनि बुझ्ने ।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको बाटो ठूली र सानी उकालीको संरक्षणको अभावका कारण ओझेलमा परेको छ । सानी उकालीको मोटर बाटो भइ लामो बाटो प्रयोग गरी अहिले मानिसहरु हिड्ने गरका छन् । ओस्वा खोलाबाट सिधा माथि निस्कने सानी उकाली मियालका काँडाले हिडि सक्नु छैन । अर्को ठूली उकालीमा भने मानिसहरु हिड्ने गर्दा केहि हिड्न मिल्नेछ । तर उचित संरक्षण भएको पाइदैन । वनमारा काँडाले यो वाटोलाई पनि ढाकेको छ । अहिले यो बाटो खासगरि मर्दा पर्दाको रुपमा मात्रै प्रयोग भएको छ । कहिलेकाँहि सिद्घार्थ राजमार्गमा विभिन्न कारणवस गाडी नचलेका वेला पैदल मार्गको रुपमा प्रयोग हुने ठूली र सानी उकाली भई अहिले पनि मान्छेहरु हिंड्ने गर्दछन् ।
यो बाटोको उचित संरक्षण गर्ने हो भने यसलाई पर्यटकीय पैदल मार्गको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यो बाटोको बीचमा दर्जन बढी धार्मिक साँस्कृतिक स्थलहरु पनि छन् । जसको अवलोकन गर्न पनि सकिन्छ । ऐतिहासिक यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय पैदल मार्गको रुपमा विकास गरि प्रचार प्रसार गर्न सक्ने हो भने यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि धेरै हदसम्म टेवा पुग्न सक्छ ।
साभार बगनासकाली फिचर संग्रह
ग्रामीण क्षेत्रमा आयोजना गरिएको महोत्सव पनि पुर्ण सफलतातर्फ